Semalt Expert: Ahoana ny famoahana fanentanana fanentanana mampientanentana
Herinandro vitsy lasa izay, navoaka tao amin'ny bilaogy 60 Second Marketer, izay nanasongadina ny marina momba ny marketing-vontoaty. Ny lahatsoratra dia mifantoka amin'ny teboka fa ny marketing-kojam-paritra tsy miankina dia tsy hanampy anao hamaha ny olana rehetra.
Amin'ny maha-lavorary azy, raha ny fampiroboroboana tranonkala dia miditra amin'ny mpikirakira ny tranonkala ho an'ny mpanjifa, fitaovana tokana monja amin'ny paikadin'ny dokambarotra - clases de fotografia online. Ny fikarohana, valiny mivantana, ny fivarotana finday sy ny dokam-barotra dia fitaovana hafa ampiasaina amin'ny fivarotana.
Jason Adler, mpitantana ny Success Suisse amin'ny Semalt , mizara ny traikefany amin'ity sehatra ity.
Ny lehibe fanampiny avy amin'ny lahatsoratra nataoko nandritra ny herinandro vitsy lasa izay dia niteraka adihevitra nahafinaritra teo anivon'ny fiarahamonina 60 Martera faharoa. Na dia izany aza, dia tsy nahitako olana lehibe iray izay miatrika ireo mpandraharaha mavitrika. Ary io fanamby io dia ao anatin 'ny habetsahan'ny zavatra ifantohan'ny sainao.
Ny ankamaroan'ny mpandraharaha mavitrika dia miatrika ny fanamby hifantohana amin'ny olana iray. Misy mari-pamantarana marobe izay afaka manintona ny fifantohanan'ireo mpandraharaha mavitrika.
Amin'ny toe-draharaha misy anao rehefa sahirana amin'ny alàlan'ny e-book ianao, fanentanana haino aman-jery sosialy, lahatsoratra amin'ny blaogy, ary fampielezan-kevitra, dia mora amin'ireo parametrisma lehibe indrindra amin'ny asanao. Noho izany dia mora ny manatsara ny fampielezan-kevitra amin'ny fifantohana amin'ny olana diso.
Alohan'ny hiresahantsika ireo olana tokony hifantohanareo, dia avelao aho hitaky zavatra iray manan-danja.
Ny CEO dia tsy miraharaha ireo fanentanana ara-barotra afa-po. Ny famoahana CEO dia mamoaka taratasy alohan'ny tatitra isan-taona, izay manome lanja lalindalina kokoa momba ny olana goavana misy eo amin'ny orinasa sy ny fepetra hampiasaina hamahana ireo olana. Amin'ity taratasy ity, ny talen'ny CEO dia mifantoka amin'ny lohahevitra tokana etsy ambany.
Ny mpikirakira votoatim-potoana maro dia mifantoka bebe kokoa amin'ny tetika toy ny lahatsoratry ny bilaogy sy e-boky fa tsy mifantoka amin'ny fanangonam-bokan'ny mpanjifa sy ny fitomboan'ny fidiram-bola.
Ireto manaraka ireto dia hanampy anao hahomby rehefa manomboka ny fampielezan-kevitra amin'ny votoatin'ny votoatiny:
Diniho ny Landscape - anontanio ny mpiara-miasa aminao izay heveriny ho hevi-dehibe. Andraso ny ankamaroan'izy ireo hiteny amin'ny teny taktika fa tsy tanjona hendry.
Miverena indray ny ezaka ataonao - azavao fa ny mpiasanao dia mahatakatra fa na inona na inona lanjan'ny tetika dia tsy misy dikany raha tsy mahavita mifantoka amin'ny vokatra. Amin'ity fomba fijery ity, ny vokatra tadiavina dia ny mahazo mpanjifa vaovao miaraka amin'ny tanjona amin'ny fanatsarana ny tombom-barotra.
Manara-maso ny fivoaranao - mitandrema ny isan'ireo fotoana ao anatin'ity herinandro ity rehefa miala amin'ny tanjona fototra amin'ny fahazoana mpanjifa vaovao ianao. Mifantoha bebe kokoa amin'ny tanjona amin'ny fitomboan'ny fidiram-bola. Aza mifantoka bebe kokoa amin'ny tetika. Tsy midika izany hoe tsy ilaina ny tetika na tokony hajao ny mason'izy ireo. Midika fotsiny fa tokony hahaliana anao kokoa ny vokatra farany.
Manampy anao ve izany? Manantena aho fa hanao izany. Ampahafantaro ahy ny momba ny valim-pifidianana amin'ity herinandro ity. Hanahy ny fomba fijerinao sy ny eritreritrao momba io olana io aho rehefa mandalo amin'ny fahaefatra, ary ny ampahefatry ny taona.